In Vegas toddobaadkan at WebTrends Engage | Martech Zone
Axad, Abriil 5, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kama qeyb geli doono shirka oo dhan, laakiin dadka sharafta leh ayaa WebTrends iyo Isgaarsiinta Voce ayaa igu martiqaaday inaan kaqeybgalo gudiga mareegta ee barta WebTrends Waxay Qabtaan Shirka 2009 toddobaadkan Las Vegas. WebTrends waa hormuudka bixiyeyaasha shabakadda Analytics iyo xalalka sirdoonka suuqgeynta macaamiisha.
Waxaan xiiseeyaa inaan waqti la qaato Istiraatiijiyadda Saxaafadda ee Cusub Justin Kistner si loo arko sida ay ururadeenu isu caawin karaan. Shirka ayaa leh ajandaha buuxiyey, oo ay kujiraan maamulayaasha xogta ololaha ugu sareeya ee Obama kuwaas oo la wadaagi doona sirta bartilmaameedka dhagaystayaasha saxda ah, ka qayb qaadashada warbaahinta cusub iyo baaritaanka xogta
Sidoo kale, shirku wuxuu ku darayaa mid isagu leeyahay shabakad bulsheed loogu talagalay kaqeybgalayaasha iyo dadka hadla si loo sii wado xiriirka midba midka kale, wax aanan horay u arag shirarka suuqgeynta internetka laakiin xaqiiqdii ku darista qiimaha xirmada. Dabcan, waxaa jira xisaabin '09 Twitter 'sidoo kale!
Haddii aad tagi doontid munaasabadda, ama xitaa Vegas, hubi inaad i fiiriso! Waxaan rajeynayaa inaan ka hadlo munaasabada oo aan la kulmo qaar ka mid ah asxaabta warshadaha oo kaliya oo aan ku raaxeystay la hadalka khadka tooska ah.
Apr 5, 2009 at 7: 28 PM
Waad ku mahadsan tahay sheegista ku saabsan Ka qaybgalka. Waan ku faraxsanahay inaad nagu soo biirto. Marka laga soo tago naqshadayaasha xogta Obama waxaan sidoo kale leenahay Ian Ayres isagoo ka hadlaya awoodda xogta iyo tusaalaynta saadaalinta suuqgeynta casriga ah. Shakhsiyan, waan ku riyaaqay buugiisa SuperCrunchers waxaanan rajaynayaa inaan maqlo isaga oo hadlaya.
Halkaas ayaan kugu arki doonaa,